Semalt Expert Shares Nzira dzekuona nekudzivisa malware
Chireveti yakagadzirwa kubva mumashoko maviri "nhamo" uye "software." Kune zvikonzero zvakasiyana siyana nei munhu wese aigona kuwana kushandiswa kwemarware. Dware rekombiyuta ine mikana yekuputsa makombiyuta kana madivayiri efoni, kuita mhirizhonga, kutora data yakashandiswa, kana kushora vashandisi. Nenzira imwecheteyo pane maitiro akawanda e-malware ndiyo imwechete iyo kuisa iyo inogona kutora maitiro akasiyana - интернет казино бездепозитный бонус. Zviri pachena, vaseki havadi kubvumirwa kwevashandi kuisa malware. Nzira yakanakisisa yekurwisa malware ndeyokudzivirira vanotambudza kubva kuisa malware pakutanga. Mumwe anogonawo kutevera matanho mashomanana kuti aongorore mamiriro ezvinhu emamiriro ezvinhu kana akawana kuti ivo vatove varwi.
Jack Miller, mumwe wevatungamiri Semalt nyanzvi, anotarisa mamwe mazano anobatsira kuchengeta makombiyuta akachengeteka kubva kune malware.
Update Computer Security Nguva dzose
Kombiyuta inoramba yakachengetedzwa kana munhu anoshandisa mishonga inorwisa malware, mapurogiramu antivirus, uye anoisa moto. Zvose zvirongwa zvinofanira kunge zvigadziridzo zvadzo zvakagadzirirwa kuti zvione zvishandiso uye zvigadziri zvese. Nguva dzose yeuka kuchengetedza dhamoni kakawanda sezvinobvira.
Kuchenjerera Mukudhinda nekuisa New Software
Kana mumwe munhu ari kuedza kuisa purogiramu mutsva pachigadzirwa chavo, vanofanira kuve nechokwadi chokuti inobva kune webhupu yakatendwa. Uyewo, pavanenge vachidaro, vanofanira kuyeuka kuisa kuchengeteka kwekombiyuta papamusoro kuti vaone chero zvinyorwa zvisingabvumirwi nemuridzi.
Ramba Uchitarisa Mavara Ese
Pane dzimwe nguva apo uwandu hwekunyengedza emaily hutora maimiriro e-mail yakakodzera..Usambofungidzira kuti sezvo email ichiita seinobva kunzvimbo inovimbwa, kuti yakachengeteka. Yese maimeri ane email yakavharidzirwa inokonzera kakombiyuta yomumwe munhu, uye vashandi vanofanira kurega kubvisa pairi. Uyewo, mushumiri haafaniri kutora zvidzidzo zvese zvinouya pamwechete ne email.
Iva nehanya nePupup Windows
Dzimwe nguva vashandisi vekutsvaga vese vanogona kuwana huwandu hunovhiringidza. Vane chokwadi kuti vanzwe zvakadaro nekuti vatengesi dzimwe nguva vanoshandisa izvi papa kuti vaparadzire malware. Iko kune dzimwe nhamba dzakasiyana-siyana dzinowanikwa kubva kune dzimwe nzvimbo dzinoshandiswa nevashandisi kuti vadzidzise kana zvichibvira. Zvisinei, kana imwe yakawanda yakachengetedzwa pakutsvaga popup blocker, kana kusarudza kusazoita, saka haifaniri kuisa pahutano hunoonekwa pahuwandu. Chinangwa chakanaka chokuderedza nguva yavo inogona kukonzera kukuvadza kupfuura kunaka. Pakupedzisira, mumwe anofanirwa kugara akajeka chero ipi zvayo yepurogiramu inoparidzirwa kuburikidza nemapups. Imwe nzira yakajairika yenzira inoshandiswa nevatengi ndeyokutumira mapurisa kune vashandisi vanozivisa kuti vakawana malware pakombiyuta. Zvadaro zvinosanganisira kubatana uko vashandisi vanogona kushandisa kuti vatange kugadzirisa dambudziko racho. Zvisinei, izvi zvinoshandiswa zvinoshanda senyanzvi inoshandiswa kuparadzira malware.
Icho Chitendero Chave Chakatapukirwa Here?
Nyatsocherechedza zviratidzo zvinotevera:
Chirongwa chacho chinononoka zvishoma, chinoramba chichitsvaira, uye chinodzoka mhinduro dzakawanda dzisina kukanganisa pazvinenge zvichitsvaga zvese zvebasa.
Nhamba yezvipikicha zvinowedzera zvakanyanya.
Zvishamiso zvidhina zvidhori uye zvidhori zvinoratidzika pasina
Chirongwa hachidzose nzvimbo yakatarwa kana kuti peji yepamusoro.
Kutora matanho kana akabatwa
Kana zvinyorwa zvisingabhadhari zvakatova nehutachiona kombiyuta:
Rega kushandisa kombiyuta kuti utarise chero mari ipi zvayo.
Ongorora mamiriro ekuchengeteka kwepurogiramu uye kana iri kusvika kusvika.
Shandisa kombiyuta kune chero yemarware uye wozotangazve kuisa chero kushanduka.
Shandisai unyanzvi hweTI kana sangano iri rine dambudziko.
Ratidza chero humwe hushandi hunoshandisa kombiyuta pamwe nehuwandu hwahwo.